လျှိုမြောင်ကြားထဲ ၇ ဆင့် စီးဆင်းနေတဲ့သိပ်လှတဲ့ ကျောက်ဆုံ – YANGON STYLE
လျှိုမြောင်ကြားထဲ ၇ ဆင့် စီးဆင်းနေတဲ့သိပ်လှတဲ့ ကျောက်ဆုံ
💦 ရေတံခွန်တွေကို ဓာတ်ကျနေတဲ့ မိသဒ္ဓါတစ်ယောက် ဒီတစ်ခါလဲ အပူရှောင်မယ် ဆိုပြီး ရေတံခွန်တစ်ခုကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ရေတံခွန်လေးကတော့
ကျောက်ဆုံ ရေတံခွန်ပါ။ ကျောက်ဆုံ ရေတံခွန်က ဘယ်မှာရှိလဲ ဆိုတော့ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးခရိုင်အတွင်း ရပ်စောက်မြို့နယ်လေးထဲက ကျောက်ဆုံရွာလေးမှာပါ။ လျှိုမြောင်တွေကြားထဲမှာ တသွင်သွင်စီးဆင်းနေတဲ့ ရေတံခွန်ကြီးတစ်ခုပါ။
ရေတံခွန် အထပ်ထပ်နဲ့ ၇ ဆင့်ကျနေတယ်ဆိုပြီး အညွှန်းကောင်းတဲ့ ရေတံခွန်ကြီးတစ်ခုပေါ့။ တစ်ဆင့်နဲ့ တစ်ဆင့်ကလဲ အလှချင်းမတူဘူးရယ်။ အောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်ရင် ရေတံခွန်က ကျယ်ပြန့်ပီး အထပ်ထပ်လေးတွေ ဖြစ်သွားတယ်။ ပြီးရင်တော့ ဒုတ္ထဝတီမြစ်ထဲစီးဆင်းသွားတယ်။ သတိထားရမှာက ရေတံခွန် အောက်ဆုံး အဆင့်ထိသွားမယ်ဆို အရမ်းမက်ပါတယ်။ သတိထားပြီး ဆင်းရပါတယ်။ တောစီးဖိနပ်တွေနဲ့ ဆင်းမှ အဆင်ပြေပါတယ်။ တကယ်လို့ ပထမအဆင့်မှာပဲ ရေကစားမယ်ဆိုရင်တော့ ၁၅ မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်ရင် ရပါပြီ။ အရမ်းလှပြီး ရေဆော့လို့ကောင်းတဲ့ အိုအေစစ်လေးတစ်ခုပေါ့ 🌈
ရေတံခွန်ကြီးကို ဘယ်လိုသွားကြမလဲ? 💦
ရေတံခွန်ကိုသွားမယ်ဆိုရင် တောင်ကြီးဘက်ကနေလဲ သွားလို့ရသလို နောင်ချိုဘက်ကနေလဲသွားလို့ရပါတယ်။ သဒ္ဓါတို့ကတော့ ရန်ကုန် – နောင်ချို ကားစီးပြီး နောင်ချိုကတစ်ဆင့် ဒေသခံ Guide နဲ့ချိတ်ပြီး သွားခဲ့ပါတယ်။ လူများပြီး အဖွဲ့တောင့်ရင် ရေတံခွန်မှာ Tent ထိုးပြီး Camping လုပ်လို့လဲရပါတယ်။ အရမ်းပျော်စရာကောင်းမှာ အသေချာပါ ⚡️
နောင်ချိုကနေ မနက် ၈ နာရီလောက်ထွက်ရင် ရေတံခွန်ကို ၂ နာရီခွဲလောက်မောင်းရပါတယ်။ လမ်းမှာ ဒုတ္ထဝတီတံတား နောင်ချိုကိုဖြတ်ရပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း အဆုံးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းအစ ရပ်စောက်မြို့ နယ်တွင်းမှာ တည်ရှိပါတယ်။ ကျောက်ဆုံရွာကိုရောက်ပြီဆိုရင် ကျောက်ဆုံရေတံခွန်သို့ ဆိုပြီး ဆိုင်းဘုတ်တွေ့ရင် ကွေ့ပြီး သရက်ခြံကြီးကိုတွေ့ရမှာပါ။ မိုးတွင်းဆိုရင်တော့ လမ်းဆိုးပါတယ်။ ခုတော့ သရက်ခြံထဲကနေ ဝင်ပြီး ရေတံခွန်မရောက်ခင် ကားရပ်ခဲ့ရပါတယ်။ 🤪 အပြန်မှ သရက်သီးဂိုထောင်ထဲ ဝင်ပြီးစားကြတာပေါ့ 🤪
ကားရပ်ပြီးရင် ရေတံခွန်ကို လမ်းလျှောက် ဆင်းရပါတယ်။ Guide က လမ်းလျှောက်တုတ်လေးတွေပေးပါတယ် 😬 ဘာလဲပေါ့ လမ်းကပြေပြေလေးကို တုတ်တွေ ဘာတွေ လာပေးနေပါတယ်ပေါ့ 🙄 အောက်ဆုံးထိဆင်းမယ်လုပ်ထားတော့ အရင်ဆုံး အောက်ဆုံးအဆင့်ကိုသွားပါတယ်။ အဲ့လိုနဲ့ဆင်းရင်း ဆင်းရင် အဆင်းကြမ်းလာပါတယ်။ တော်တော်မတ်ပါတယ် နွယ်ကြိုးတွေလဲကူရပါတယ်။ နေကလဲ အရမ်းပူတော့ အရမ်းပြိုင်းပါတယ် 😥 ရေစိမ်ချင်နေတာ တစ်ပိုင်းသေ။ အဆင်းကြီးတော့ တော်တော် သတိထားရပါတယ်။ အောက်ဆုံးအဆင့်ရေတံခွန်ရောက်ရင်တော့ ပင်ပန်းသမျှ အမောကိ်ုပြေရော 💦
ရေတံခွန်ကြီးမှာ ဘာတွေလုပ်ကြမလဲ ?💦
ပထမအဆင့် ဒုတိယအဆင့် ရေတံခွန်တွေမှာ Cliff Jump တွေလုပ်လို့ရပါတယ်။ အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ ရေမကူးတတ်လဲ Life Jacket ပါပါတယ် စိတ်မပူပါနဲ့ တစ်ခါလောက်တော့ Try ကြည့်ပါ။ အောက်ဆုံးအဆင့်မှာတော့ ရေကူးလို့ရပါတယ်။ အဖွဲ့လိုက်ဆိုရင် အရမ်း ကိုပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
သဘာဝနဲ့ ထိတွေ့ခံစားဖို့ သွားတာမလား? အဲ့တော့ဘဟိုဟာစားချင်တယ် ဒီဟာစားချင်တယ် ချေးများလို့တော့ မရပါဘူး။ လမ်းပြတွေမှာ Gas မီးဖိုသေးသေးလေးနဲ့ အိုးလေးတွေပါလာပါတယ်။ အို ဘာပြောကောင်းမလဲ ရေတံခွန်ဘေးထိုင်ပြီး ခေါက်ဆွဲပြုတ်စားကြတာပေါ့။ အမယ် တို့ဟူးခြောက်ကြော်လေးလဲပါသေး 😬 ရေစိမ်လိုက် တက်လာလိုက် စားလိုက်နဲ့ အပြန် အတက်ခရီးကိုမေ့နေသော မိသဒ္ဓါလေးပါ 😂
အတက်ခရီးကတော့ Royal D လေးကယ်ပေလို့ပေါ့ ချွေးထွက်သန်တဲ့ ကိုယ်နဲ့ နေအပူရှိန်နဲ့ အတက်ကလဲ မက်တယ် အရမ်းပင်ပန်း 😑 ဘယ်ရမလဲ ၇ ဆင့်လုံး တစ်ဆင့်စီ ရေဝင်စိမ်ပလိုက်တယ် 🤣 မောလို့ တစ်ဆင့်ရောက်ရင် တစ်ခါစိမ် 😹
သဘာဝအလှအပတွေနဲ့ ထိတွေ့ခံစားမယ်ဆို အဓိကက အမှိုက်မပစ်ဖို့ပါပဲ။ သဘာဝကြီးကတောင် ကိုယ့်ကိုအပန်းဖြေနိုင်အောင် လှလှပပကြီး ရပ်တည်ပေးနေတာ သူတို့အလှကိ်ုလဲ ကြည့်ပြီးရော အကြည်းတန်သွားအောင် အမှိုက်တွေ စွန့်ပစ်ဖို့တော့ အားနာစရာကြီးလေနော် 😥 ပါလာသမျှ စားထားသမျှ အမှိုက်ခွံတွေကိ်ု အမှိုက်ပုံး (သို့) ကိုယ့် အိတ်ထဲကိုယ်ထည့်သွားကြပါ။
ရေတံခွန်ထဲကိုလဲ အမှိုက်တွေပစ်မချပါနဲ့။ ခြေရာတွေပဲထားရစ်ခဲ့ပါ ဓာတ်ပုံနဲ့အမှတ်တရတွေပါ ပြန်ယူလာပါနော် ❤️
✔️ စစ်ဖိနပ် သို့ တောစီးဖိနပ်ယူသွားပါ
✔️ ညအိပ်မယ်ဆို ဆေးဝါ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေယူသွားပါ။ ကျန်တာအကုန် Guide မှာပါပါတယ်။
ရှေ့မှာ ကျောက်နံရံကြီးနဲ့ ဒုတ္ထဝတီမြစ်
Wow ပေါ့ ဒုတိယအဆင့် ရေတွေနဲနေပီ မိုးတွင်းဆို ပိုများတယ်
အပြန်လမ်းမှာ Rock Climbing လုပ်လို့ကောင်းမယ့် ကျောက်နံရံတွေ
Photo Crd to Original Uploader
ကဲ ဒီလောက်ဆို ကျောက်ဆုံရေတံခွန်ကို ကိုယ့်ပါကိုသွားလို့ရပြီထင်ပါတယ် ဈေးလဲ သောင်းဂဏန်းပါပဲ လမ်းညွှန်ကို ဖုန်းဆက်မေးမြန်းပြီးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင့်။
အဆုံးထိဖတ်ပေးလို့ အားလုံးကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️
#ShanState #KyaukSone 💦